Soo dejisan Exiland Backup Free 5 Standard... – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaExiland Backup Free
Bogga rasmiga ah: Exiland Backup Free
Swiland Backup Free – Software si loo soo koobo faylasha. Software wuxuu kuu fidiyaa inaad dooratid feylasha maxalliga ah ama faylasha lagu keydiyo FTP-server, ku calaamadee nooca nasiibka iyo bilaabida habka koobiyeynta. Swiland Backup Free waxay awood u leedahay in ay sheegto wadada badbaadada ee kaydinta oo ku cadaadi buug ZIP ah ama hayso asalka asalka ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dooratid magac dabagal ah oo ku qoran taariikhda iyo wakhtiga nuqul abuurista. Dib u soo noqoshada Waddan Xor ah waxay baari kartaa nuqulada la heli karo oo dib loo soo celiyo faylasha shakhsiyadeed ee ku jira faylka ama goobta asalka ah. Barnaamijka ayaa sidoo kale taageeraya jadwalka qorshaha hawsha kaas oo si toos ah u bilaabi doona waqti cayiman ama inta lagu jiro tallaabooyinka qaarkood.
Kaararka nuqulada ee ku saabsan kaararka xogta, mashiinka maxaliga ah ama FTP-servers
Eegida faylasha ku jirta nuqul
Hawlaha maareynta hawsha xiliga dayactirka
Soo celinta faylasha kaydka shaqsiga
Soo dejisan Exiland Backup Free
Faallo ku saabsan Exiland Backup Free
Exiland Backup Free Xirfadaha la xiriira